बिज्ञान प्रबिधि – Wow Sansar
काठमाडौं– भगवानको फिंगर प्रिन्ट भेटियो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर नासाले एउटा फिंगर प्रिन्ट फेला पारेको छ । जो सारा विश्वमै कसैको फिंगर प्रिन्टसँग मेल खाँदैन । यो सारा आकाशगंगाको साइज भन्दा पनि ठूलो रहेको छ । हुन त हरेक मानिसको आफ्नो फरक फिंगर प्रिन्ट हुन्छ । फिंगर प्रिन्ट हाम्रो शरीरमा डीएनएको जस्तै छ, जो दोश्रोको डीएनएसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि मेल खाँदैन । नासाले फेला पारेको यसलाई भगवानको फिंगर प्रिन्ट भनिएको छ । यो मानिसको औँलाको साइजको नरहेको बताइएको छ । नासाको यो फोटो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको १८ घण्टामै १४ लाख ३७ हजार भन्दा धेरे लाइक आएको थियो ।
यदि तपाईको दाँत पहेलो भएको छ वा मुखबाट श्वास गन्हाउँछ भने एउटा उपाय तपाईका लागि रामबाण हुनसक्छ । अक्सर हामी पहेलो दाँतलाई टूथपेस्टले माझेर सफा गर्ने प्रयास गर्छाै । तर, दाँत माझ्दा दाँत सफा हुनुको सट्टा दाँत घिसिन्छ । र ३० देखि ४० वर्षको उमेरमै दाँत टुट्न थाल्छ । दाँतलाई सफा गर्ने घरेलु उपाय पनी छन् जसले दाँतलाई सेतो बनाएर चम्काउछ र दाँतलाई कुनै नोक्सानी पनी पुगाउँदैन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** १) कागतीको आधा भाग निचोरेको टुक्रामा चार बूँद तोरीको तेल, थोरै नून र हिल्दी हालेर दाँत माझ्नुस् । पहेलो दाँतलाई चम्किनेगरी सेतो बनाउनेछ । दाँत सफा देखिनेछ । २) कागतीको बोक्रा घाममा सुकाएर पिस्नुस् । यसका थोरै खाने सोडा र नून मिसाएर दाँत माझ्नुस् । दाँत चम्किन थाल्नेछ । सफा राख्नेछ । दाँतको सामान्य रोग पनी ठिक हुनेछ । ३) कागतीको बोक्रा घाममा सुकाएर पिस्नुस् र माझ्नुस् । यसबाट दाँत
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3458)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1069)